Ceni: “Tsy fotoan’ny adihevitra politika izao” | NewsMada
Ceni: “Tsy fotoan’ny adihevitra politika izao”
Nitondra fanazavana manoloana izao toe-draharaha manoloana ny fifidianana izao ny eo anivon’ny Ceni. Mazava ny azy ireo fa efa tsy tokony hisehoan’ny adihevitra intsony izao.
“Apetrakay amin’ny mpanao politika ny adihevitra politika. Na izany aza, hanontany eo anatrehan’ny fetra apetraky ny lalàna sy ny lalàmpanorenana izahay: mbola fotoana anaovana adihevitra politika ve izao? Mba ho fanajana ireo lalàna manankery, tsy aleo ve mandroso amin’ny fifidianana?”
Ireo ny fanontaniana tsy mila valiny naroson’ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, tamin’ny fampahafantarana ny rindram-baiko (logiciel) hikirakirana ny voka-pifidianana , teny Nanisana, omaly. Izay filoham-pirenena voafidim-bahoaka eo no hitondra fandaminana ny firenena.
Tsy ny vahoaka mpifidy ve no tompom-pahefana mahafantatra izay heveriny ho mendrika hitondra azy sy hamaha ny olana rehetra eto amin’ny firenena, mandritra ny dimy taona manaraka? Raha misy ny tahotra korontana, tena miezaka miaro ny tsy hisian’izany ve isika?
Hotsakotsakoin’ny kandidà rehetra izany fanontaniana izany, ary hodinihin’ny vahoaka, araka ny nambarany.
Tsy misy lisi-pifidianana tonga lafatra
Misy ny fitsirihana anatiny nataon’ny Ceni ny lisi-pifidianana, fa nisy koa ny nataon’ny OIF indroa miantoana teo anatrehan’ny solontenan’ny firaisamonina sivily sy ny fiarahamonina politika. Mazava ny fehinkevitra tamin’izany: azo hanaovana fifidianana tsara ny lisi-pifidianana amin’izao fotoana izao.
Tsy misy eran’izao tontolo izao ny lisi-pifidianana tonga lafatra, na any amin’ny firenena faran’izay mandroso aza. Misy hatrany ny tahan’ny tsy fahatomombanana. “Noho izany, hozakaintsika ny tahan’ny tsy fahatomombanana ankehitriny, ka hiroso amin’ny fifidianana isika mba ho fanajana ireo lalàna manankery”, hoy izy.
Tsy mitombina ny hoe biletà voamarika mialoha
Tsy mitombina ny filazana fa misy ny biletà efa voamarika mialoha, araka ny fanazavany. Mihidy avy any Afrika Atsimo ka hatreo amin’ny biraom-pifidianana ny biletà hampiasaina. Misy famantarana manokana ny biletà, hahalalana izay marina na tsia. Izy ihany io mahalala izany. Farany, tsy azo arotsaka amin’ny vata fandatsaham-bato ny biletà raha tsy vitan’ny mpikamban’ny biraom-pifidianana roa sonia, izay tsy fantatra raha tsy amin’ny androm-pifidianana.
Nilaza handray andraikitra manokana manoloana ny fanoherana ny fifidianana ny Ceni, ary handray an-tanana ny fangatahan’ireo kandidà sasany.